Email Marketing ကိုတွင်တွင်ကျယ်ကျယ် ဘာကြောင့်သုံးလာကြတာလဲ? - WebsiteDesign.com.mm
Email Marketing ကိုတွင်တွင်ကျယ်ကျယ် ဘာကြောင့်သုံးလာကြတာလဲ?
5:16pm on Wednesday 19th February 2020
ခုချိန်မှာ Email အသုံးပြုသူ ၃.၈ ဘီလီယံအထိ ရှိနေပါတယ်။ လူဦးရေကို တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း ၃၄ ရာခိုင်းနှုန်းလောက်ကလည်း ဒီ Email ကို အကြောင်းအမျိုးမျိုး အတွက် အသုံးပြုနေကြပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ဆက်သွယ်ဖို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ လုပ်ငန်းအတွင်းမှာ Communication အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် အသုံးပြုနေကြပါ။ ဒီလိုပဲ Internet Marketing လုပ်ငန်းတွေမှာလည်း ကြော်ငြာတွေအတွက်၊ Promotion တွေအတွက် Email Marketing ကိုအသုံးပြုလာကြပါတယ်။ Email Marketing က Internet Marketing အတွက် ဘာကြောင့်အသုံးဝင်တာလဲ? ဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲ ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရင်းအချို့ကို ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်…
Email Marketing က Customer Acquisition ပိုင်းမှာ Social Media တွေထက်ပိုပြီး Effective ဖြစ်ပါတယ်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် Cost-Effective ဖြစ်ပြီး ကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့ Consumer အရေအတွက်ဆီကို အချိန်တိုအတွင်းမှာ Information တွေကို ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်။
၇၄ ရာခိုင်နှုန်းသော Marketer တွေရဲ့ ပြောကြားချက်တွေ အရ Email Marketing က Targeted Customer Engagement ကိုတိုးများလာစေပါတယ်။
Measurable ပိုင်းမှာလည်း အားသာပါတယ်။ Email Marketing Tool တွေကို အသုံးပြုမယ် ဆိုရင်လည်း ဖွင့်ဖတ်ထားတဲ့ Mail တွေ၊ ဘယ် Link တွေက Click ဘယ်လောက်ရလဲ၊ လူဘယ်နှယောက်က Subscribe ထားတယ် ဘယ်နှယောက်က Unsubscribe လုပ်သွားတယ်ဆိုတာတွေကို ကောင်းကောင်း Tracking လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအချက်က Remarketing အတွက် အထောက်အကူကောင်းကောင်း ပေးနိုင်ပါသေးတယ်။
Mobile Device တွေမှာ လျင်လျင်မြန်မြန်ပဲ Email စစ်နိုင်ခြင်း။ ဒီအချက်မှာဆိုရင်လည်း သင်ပို့လိုက်တဲ့ Email ကို Consumer တွေက သူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ အကြောင်းအရာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် အချိန်တို အတွင်းမှာပဲ Email စစ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၉၁ ရာခိုင်နှုန်းသောသူတွေရဲ့ Smartphone တွေထဲမှာ Email Access က Built-In အနေနဲ့ရှိနေပြီး ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းသောသူတွေရဲ့ Smartphone တွေထဲမှာတော့ Social Networking တွေရှိနေပါတယ်။
ဒီအချက်ကို သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Email Marketing က စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် ပိုပြီး တိကျ မြန်ဆန်စေနိုင်ချေရှိတာလို့ သုံးသပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Internet Marketing မှာ Email Marketing ကလည်း အရေးပါတဲ့ ကဏ္ဍတစ်ခု အဖြစ်ပါဝင်နေတာကိုလည်း တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။